Fifindrà-Monina | Desambra 2021
tsy afaka manampy kaonty mailaka amin'ny iphone
maninona aho no tsy manonta avy amin'ny iphone
maninona no mafana ny iphone-nao
Visa ho an'i Etazonia mihoatra ny 60 taona
Visa ho an'i Etazonia mihoatra ny 60 taona. Ahoana ny fomba fangatahana visa amerikana ho an'ny be antitra?. Ity lahatsoratra ity dia hanampy anao hamaly ny sasany amin'ireo fanontaniana fototra mety anananao.
Mandra-pahoviana no tsy maintsy miandry ny fiverenako any Etazonia?
Fanontaniana: Mandra-pahoviana no tsy maintsy miandry ny fiverenako any Etazonia? Ka manana visa mpitsidika any USA (B1 / B2) ianao ary te-hitsidika azy imbetsaka
Inona no hitranga raha tsy mahazo visa aho?
Inona no hitranga raha mandà ny fangatahako visa U ny USCIS? Raha lavin'ny USCIS ny fangatahanao ny satan'ny visa U dia tsy miovaova toy ny taloha ny toetranao.
Fanendrena ny fitsarana amin'ny familiana tsy misy fahazoan-dàlana
Fanendrena any amin'ny tribonaly amin'ny familiana tsy misy fahazoan-dàlana. Handray citation amin'ny Driving Sans licence ianao manao hoe: Heloka bevava. Ny fisehoana amin'ny fitsarana dia takiana toy izao '
Hafiriana ny faharetan'ilay fanangonan-tsonia avy amin'ny ray aman-dreny monina ka hatramin'ny zanaka
Mandra-pahoviana no maharitra ny fanangonan-tsonia amin'ny ray aman-dreny monina ka hatramin'ny zanaka? Ny faharetan'ny zanakao lahy sy ny zanakao vavy hifindra monina any Etazonia Miankina amin'ny habetsaky ny tinady ao amin'ny sokajy F2B
Inona ny taratasy fanohanana ara-bola ny visa?
Inona ny taratasy fanohanana ara-bola ny visa? Ilay olona manohana visa any Etazonia dia mitaky taratasy fanohananana. Ilaina ity taratasy ity raha raisina
Mety fehezan-tsoratra an-tsoratra mety ho an'ny zom-pirenena amerikana misy ohatra hoe mpihazona karatra maintso manantena ny ho olom-pirenena amerikana ianao
Ahoana no hahalalana ny trangam-pifindra-monina NUMBER? Ho hitanao ao amin'ny pejy voalohan'ny www.uscis.gov/es ny rohy mankany amin'ny My Case Status Online
Ahoana ny fomba fanoratana taratasy amin'ny mpitsara mpifindra monina? na taratasy fanolorana ho an'ny fifindra-monina. Ny olona ao amin'ny fianakaviana na ny namana dia afaka manoratra taratasy fanohanana.
Maharitra hafiriana ny fangatahana zaza efa lehibe? Mandra-pahoviana ny zanakao lahy na zanaka vavy (manambady na mihoatra ny 21 taona) no afaka mifindra monina rehefa avy nametraka ny I-130 ianao
Fanovana ny satan'ny visa avy amin'ny TOURIST ho an'ny STUDENT
Fanovana ny satan'ny visa avy amin'ny mpizahatany mankany amin'ny mpianatra. Raha any Etazonia ianao amin'ny maha mpizahatany anao amin'ny visa mpitsidika B-2 dia azo atao ny miova ho mpianatra F-1
Ahoana no ahafantarako raha manana taratasy fampisamborana ampiasaina aho?
Ahoana no ahafantarako raha manana taratasy fampisamborana any Etazonia aho? Kalifornia, Texas, New York, Puerto Rico, tsy misy fandoavana onitra. Mora ny mihazona fanamarinana fiantohana maimaimpoana raha fantatrao izay tokony hatao.
Fahazoan-dàlana hiasa any Etazonia - Izay rehetra tokony ho fantatrao
Etazonia dia manome alalana ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao. Ny mpampiasa rehetra any Etazonia (Etazonia) dia tsy maintsy manamafy fa afaka manao izany ny mpiasa
Fepetra takiana amin'ny zom-pirenena amerikana ho an'ny zokiolona
Fepetra takiana amin'ny zom-pirenena amerikana ho an'ny zokiolona mba ho lasa olom-pirenena U.S. Ho an'ireo mihoatra ny 55 taona, ny fepetra takiana
Ahoana no ahafantarako rehefa tonga ny KART GREEN?
Ahoana no ahafantarako rehefa tonga ny KART GREEN? Raha mitranga izany. Tokony handeha an-tserasera amin'ny tranokala USCIS ianao ary hanao fotoana hifanomezana fampahalalana
Mandra-pahoviana no halaina ny mpifindra monina?
Mandra-pahoviana no hiala ny fifindra-monina? Ny fotoana fanodinana famoahana vonjimaika I-601A dia manodidina ny 4 ka hatramin'ny 6 volana. Raha ny mahazatra ny fangatahana
Azoko ampiasaina ve ny laharam-pitaterana hiasa? Mba hanazavana ny valin'ny fanontaniana, azoko atao ve ny miasa miaraka amin'ny laharana ITIN? Tokony ho azonao tsara ny karazana
Ahoana ny fomba fanaovana taratasy fanasana ho an'ny vahiny
Ahoana ny fomba hanaovana taratasy fanasana ho an'ny vahiny? Ny taratasy fanasana visa dia tsy maintsy ho anao manokana, fa tsy maintsy misy antoka ho an'ny governemanta
Fahazoan-dàlana 6 volana any Etazonia
Fahazoan-dàlana 6 volana any Etazonia Mandra-pahoviana no hijanonako any ivelany amin'ny fizahantany? Ary inona ny halavan'ny fijanonana? Mandehana lavitra
Mandra-pahoviana ny fizotran'olom-pirenena amerikana? Raha toa ka 6 volana eo ho eo ny fotoana fanodinana USCIS